Ungakusebenzisa njani ukuthayipha kwelizwi kuGoogle kwi-Android | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Ixesha elide, Ukuchwetheza kwilizwi likaGoogle kunokusetyenziswa kwiifowuni ze-Android. Ngombulelo kulo msebenzi, ukuba asifuni okanye asikwazi ukubhala ngesandla, singayalela kwifowuni umyalezo esifuna ukuwubhala ngalo mzuzu. Yonke into esiyicelayo iya kuvela kwiscreen. Inokuba lukhetho olukhululekileyo ngaphezulu kwesihlandlo esinye.
Enkosi kwilizwi likaGoogle lokuyalela siza kuthi ukwazi ukubhala kwi-Android usebenzisa ilizwi lethu. Nangona abasebenzisi abaninzi bengacacanga ncam malunga nendlela osetyenziswa ngayo lo msebenzi. Ke ngoko, sikuxelela ngakumbi ngalo ngezantsi.
Lo msebenzi ngoku uyafumaneka kuzo zonke iikhibhodi ezikwi-Android. Ayinamsebenzi nokuba usebenzisa iGboard okanye nayiphi na enye ikhibhodi. Kuyo ngamaxesha onke sinesitshixo okanye iqhosha elinophawu lombhobho. Ngokucofa kuyo, eli lizwi lokuyalela liyasebenza kwaye sinokuqala ukuyalela umyalezo wethu kwifowuni.
Ngumsebenzi olunge kakhulu, nangona ukhona imiba ethile elungileyo ukuba uyiqwalasele kwaye uyazi ukufumana okungakumbi kuyo. Kuba kubalulekile ukuba siyilungelelanise neemfuno zethu kunye nokhetho lwethu ukuze siyisebenzise ngendlela efanelekileyo.
1 Cwangcisa ilizwi eliyalelayo
2 Iimpawu zokubhala
3 Sebenzisa umyalelo welizwi
Cwangcisa ilizwi eliyalelayo
Ngaphakathi kuseto lwefowuni yethu ye-Android sifumana icandelo leli lizwi lokuyalelwa. Indawo ekuyo ihlala ikwi "Voice". Nangona kuxhomekeke kwifowuni yefowuni yakho inokwahluka. Ungasoloko ukhangela ngokuthe ngqo ukuthayipha kwelizwi kuseto lwefowuni yakho. Kuba uya kufumana kweli candelo. Kukho izinto ezimbalwa esinokuthi sizilungiselele.
Umsebenzi omnye onokuba luncedo kwi-Android kukuqondwa kwelizwi ngaphandle kweintanethi. Ngale ndlela, sinokusebenzisa lo myalelo ngaphandle kokuqhagamshelwa kwi-Intanethi. Kuya kufuneka sikhethe ulwimi esifuna ukusebenzisa lo msebenzi ngalo, ukuze iphakheji yedatha ikhutshelwe kwaye ke sikwazi ukusebenzisa umsebenzi ngawo onke amaxesha. Ukuba uyafuna, unokukhuphela iilwimi ezininzi, kodwa kuphela ezo siza kuzisebenzisa ngokwenene. Kuba bathatha indawo.
Omnye umsebenzi onokubangela umdla kwabanye abasebenzisi be-Android ngulo vimba amagama amabi. Sinomsebenzi enkosi kuwo esinokuthintela ukuba lawo magama angathunyelwa anokungafaneleki kwezinye iimeko. Ngokusengqiqweni, ngumsebenzi onokuhlala usebenza i-100% kuthi, kodwa ayihlali inika iingxaki. Singayenza okanye siyenze isebenze kuseto.
Xa sisebenzisa ukuchwetheza kwelizwi likaGoogle kwifowuni yethu ye-Android, singongeza iziphumlisi kwizivakalisi zethu. Ngale ndlela, yonke into esiza kuyithumela iya kuba yendalo ngakumbi, ukongeza ekubeni nakho ukunqanda ukudideka kwiincoko zethu. Ukuzisebenzisa, kufuneka siyitsho xa usiyalela:
Ngokuthi, Siza kubona ukuba lo mqondiso uza kuboniswa kwisicatshulwa esivela kwiscreen sicele ukuchwetheza kwelizwi kuGoogle. Kunokubakho amaxesha apho kungasoloko kusebenza kakuhle kwaye kukho imiqondiso esishiyileyo. Ke ngoko, kubalulekile ukuba siphonononge isicatshulwa ngaphambi kokuba sithunyelwe komnye umntu. Ukuphepha ukungaqondani kwezinye iimeko.
Ukongeza, kubalulekile ukuba uyazi loo nto ukuqala kombuzo okanye isikhuzo asinakunyanzelwa. Ke sisebenzisa uphawu lwesibini kuphela, uphawu lokuvala, njengakwezinye iilwimi. Akubonakali ngathi eli thuba lokusebenzisa imiqondiso emibini liyakwaziswa.
Sebenzisa umyalelo welizwi
Indlela yokuyisebenzisa yeyona ilula. Kufuneka siye kwisicelo semiyalezo okanye i-imeyile kwifowuni yethu. Kwangokunjalo, ngaphakathi kwebhodibhodi sinamaqhosha ale microphone eyenza ukuthayipha kwelizwi kuGoogle kwi-Android. Ngokucofa kuyo sifumana umyalezo "yithi into." Cinezela okanye uqale ukuthetha.
Ngale ndlela, Yonke into esiyithethayo iya kuqala ukubhalwa kwiscreen ngenxa yonyanzeliso. Xa umyalezo ulungile, siyema kwaye sinokuwuthumela kumntu esithetha naye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ungakusebenzisa njani ukuthayipha kwelizwi kuGoogle kwifowuni yethu ye-Android
UJohan berghman sitsho
Ngomhla we-Meyi ka-2019 kunye nokubanakho ukubeka «amanqaku eziphumlisi» ngezwi elichazayo kwi-android nakwi-google ayikafumaneki ngeSpanish. : /
Phendula kuJohan Berghman
Ndiyathetha kwaye le ndithetha ngayo iyabhalwa kodwa indawo yokubhala ayikasebenzi okwangoku.
Inqaku leXiaomi 8 ifowuni
Iziphumlisi eSpanish azisebenzi. Ingaba malunga nokongeza izikhalazo? Kungenxa yokuba ukuba kunjalo sithumela iodolo yehlabathi kwaye iza kunetha. Ngaba kuyimfuneko ukufikelela kuloo ndawo? Ndiyabulela umphathi okhutheleyo olifaneleyo ityala. Enkosi
Ulungile uJosé Manuel, uzwilakhe ngelizwi uvela kwinxalenye ephezulu yebhokisi yebhodi yezitshixo, ngasekunene, ndiyakubamba ukuze ubone, ngekhe uyibone.
Ukuyihlaziya kwakhona unalo eli khonkco -> https://www.androidsis.com/como-usar-el-dictado-por-voz-de-google-en-nuestro-telefono-android/